तामाकोशीको सेयर बाँडफाँड, कसले कति पाए ? « Bizkhabar Online
तामाकोशीको सेयर बाँडफाँड, कसले कति पाए ?
12 June, 2015 8:32 pm
२९ जेठ, काठकाडौं । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सेयर बाँडफाँड भएको छ । आयोजनाको सेयर विक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषले आज साँझ एक कार्यक्रमका बीच सेयर बाँडफाँड गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका कर्मचारीले भने ५० देखि ४ सय २३ कित्ता सेयर पाएका छन् । सेयर नपर्ने आवेदकहरुलाई आगामी असार ३ गते देखि पैसा फिर्ता गरिने कोषका कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण पौडलले जानकारी दिए । सेयरको सम्पुर्ण जानकारी www.nlk.org.np मा गएर हेर्न सकिनेछ ।
दोलखावासीका लागि छुट्याइएको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर भने केही समय पछि विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्काशन गरिने छ ।